Iimpawu kunye neentsingiselo: Izilwanyana, amaKristali, amaphupha, iintyatyambo, amaMelika aseMelika, iCeltic, iChakras kunye neAuras! - Iintsingiselo Iintsingiselo
Iimpawu kunye neentsingiselo
umlilo amanzi umhlaba umoya nomoya
Isimboli ikhona ukuhombisa nokutyebisa, hayi ukwenza umbono wobugcisa. -UStephen King
Ukusuka kumanani ukuya kwiifom zejometri, imibala, imiqondiso ye-zodiac kunye nayo yonke imiba yendalo-kukho unxibelelwano lwe-esoteric, imikhombandlela yokomfuziselo, ethi ping kulwazi lwethu de siqwalasele kwaye siqale ukubona unxibelelwano kunye nezifundo. Umlindi ubukela ezo iisimboli kunye neentsingiselo ngethemba lokwenza ubomi babo (okanye ubuncinci usuku olunye) bube ngcono kubo, kwabanye okanye kuluntu luphela. Skrolela ezantsi kwaye ucofe kwisimboli ofuna ukufunda ngaso. Kwakhona, cofa ukufunda okungakumbi malunga nokuba ungakwenza njani oko Iimpawu kunye neentsingiselo ingakunceda!
Imibala eyi-7 ye-Chakra, iiMpawu, kunye neentsingiselo
7 Imibala ye-Chakra, iiMpawu, kunye neentsingiselo Kuphela kuxa sithulisa izandi zobomi bethu bemihla ngemihla apho ...
Uphawu lwezilwanyana kunye neentsingiselo
Umfanekiso ovela kudade wethu-indawo ethi WhatIsMySpiritAnimal.com Animal Symbolism & Meanings Wamkelekile kwicala lasendle! Ukoyama malunga nokuqonda uphawu lwesilwanyana ...
Imibala yeAura kunye neentsingiselo
Imibala yeAura kunye neentsingiselo zeAura iintsingiselo zombala ziyahluka ngokuxhomekeka kwinkcubeko kunye nexesha. Nangona kunjalo kukho izinto eziqhelekileyo esinokuthi ...
Iileta zeeNcwadi kunye neentsingiselo
Iileta zeeNcwadi kunye neentsingiselo Yintoni malunga nenkcubeko yamaCeltic kunye neentsingiselo ezingumqondiso weempawu zazo, kwiinkulungwane ...
Iintsingiselo zombala kunye nesimboli
Iintsingiselo zombala kunye neMibala yeSimboli! Kumnandi akunjalo? Apha kwi-Daily Horoscope Astros ngekhe sifumane ngokwaneleyo-ngakumbi ...
Iintsingiselo zeentyatyambo kunye neMpawu
Intsingiselo yeentyatyambo kunye neMpawu: Iintyatyambo zokuzalwa, uLwimi lweentyatyambo, kunye neFloriografi Umhlaba uhleka iintyatyambo. - URalph Waldo ...
Ukuphilisa amakristali kunye namatye
Ukuphilisa amakristali kunye neentsingiselo zamatye kunye nokuphilisa kunye nePropati yePropathi yeemagnethi zehlabathi, manyanani! Kukho into entle kwaye ...
Iimpawu zoLuntu zaseMelika eziMnyama
Iimpawu zoMdibaniso wezilwanyana waseMelika uphawu lwezilwanyana, kwaye ngokwenene iisimboli zeNdalo xa zizonke, zibonakalisa kakhulu kwiinkqubo zenkolelo zaseMelika ...
Amanani amanani kunye neentsingiselo
Inani lamanani kunye neentsingiselo Fumana inombolo yakho yokubala ngezantsi kwaye ucofe kumfanekiso okanye isihloko ukuze ufunde konke malunga ...
Iinyanga ezili-12 zeSimboli kunye nentsingiselo: amatye okuzalwa, imiqondiso yeZodiac, iintyatyambo, ukubala ngamanani kunye nokunye!
Iinyanga ezili-12 zeSimboli kunye nentsingiselo: amatye okuzalwa, imiqondiso yeZodiac, iintyatyambo, ukubala ngamanani kunye nokunye! Phantse wonke uMthakathi okanye iWiccan iyazi malunga ...
Izikhokelo zeKhadinali yeSimboli kunye neentsingiselo
Izikhokelo zeKhadinali Iimpawu kunye neentsingiselo Njengokuba abantu bamandulo bekhula kancinci kancinci kwaye belazi ngakumbi ilizwe labo, uvakalelo ...
Iimpawu ezintlanu zoMfuziselo kunye nentsingiselo yinto esisiseko! Uhlobo lweelwimi zokomfuziselo kukuba kufuneka, ...
Uphawu loMthi kunye neentsingiselo
Uphawu loMthi kunye neentsingiselo Cofa kwiMthi ofuna ukuyazi ngakumbi ngayo. Skrolela ezantsi ukuze ufunde konke ...
Imibala yeAura, iintsingiselo, kunye nococeko
Ukucinga ukuba iAuras iyinyani? Ngaba ufuna ukwazi indlela yokubona iAuras? Ngaba ufuna ubulumko bokufanisa ngemibala ye-Aura kunye neentsingiselo? Ngaba uziva unenkungu kwaye ufuna ukufunda ukucoca kunye nokucoca iiAuras zakho? Cofa ukuze ufumane ulwazi olunzulu malunga nendalo iinkalo zamandla e-auric loo cocoon umzimba womzimba wazo zonke izinto eziphilayo.
Ukusuka kwiingcambu zethu zeCeltic, ezi mpawu zamandulo zokunyaniseka, imbeko, kunye nolona hlobo luthando lusathetha nentliziyo nomphefumlo wethu. Funda konke malunga neyona Leta iphambili yeeleta. Fumanisa imbali, isimboli, kunye neentsingiselo ze Triquetra, Triskele, Celtic Knotwork, Claddagh Ring, Celtic Cross, Spiral, kunye nokuninzi .
I-Chakra Symbols Colors, kunye neentsingiselo
Funda konke malunga nesimboli seChakra kunye neentsingiselo. Fumanisa ukuba uyenza njani ukuba isebenze, icace, icoceke, ilungelelanise, kwaye uphilise la mavili ejikelezayo emandla emzimbeni wakho. Fumana ulwazi lwe-metaphysical kwinto nganye ye 7 Chakras ezinje ngeLitye lokuPhilisa elihambelanayo, iElement, uphawu lweZodiac, kunye nokuninzi!
Iintsingiselo zombala, uphawu kunye nePsychology
Ngaba ukhe uzibuze ukuba kutheni iPinki neBomvu inxulumene nothando? Ngaba uqaphele ukuba izibhedlele ezininzi zipeyintwe ngokukhanya okuluhlaza okotshani okanye oluhlaza okwesibhakabhaka? Ngaba uyazi ukuba iliso lomntu liyawubona umbala omthubi ngokukhawuleza kunawo nawuphi na umbala? Ewe! Kungenxa yoko le nto, njengenqaku lokhuseleko, iibhasi zesikolo eUnited States zipeyintwe ngeYellow. Funda konke malunga Intsingiselo yeMibala !
Ukuphilisa iikristali neentsingiselo kunye nePropathi
Ngaba ulilitye nje? Ngaba usebenzisa iikristali zokuphilisa kunye namatye anqabileyo kwiReiki yakho, ukuphilisa iTheta, ukwenza iAcupuncture, Massage, okanye enye indlela yokunyanga amandla? Ukusuka kwi-Amethyst ukuya kwiLabradorite ukuya kwiFaartz yeQuartz nayo yonke into ephakathi, fumana ulwazi olunzulu lokomoya kunye nolwemvelo malunga Ukuphilisa amatye kunye namakristali .
Imikhombandlela emi-4 eKhadinali Symbolism and Meanings
Nokuba iWiccan, iPagan, iShaman, iDruid, okanye umthandi kaMama uGaia, uphawu kunye neentsingiselo zemiyalelo emi-4 yeKhadinali inokukunceda ufumane owona mandla mhle xa useta zonke iindawo zakho ezingcwele kunye neendawo. Iingcali ze-Feng Sui, abo basebenzisa i-Spellcraft, abaphilisa amandla, kunye nabo basebenza ngamandla omhlaba basebenzisa izikhokelo zeKhadinali kuzo zonke iindlela zabo zobuqu nezobungcali. Fumanisa intsingiselo enzulu ye Imikhombandlela emi-4 eKhadinali .
Iintsingiselo zePhupha lamawaka eeMpawu zePhupha
Ngaba unamaphupha ngeenyoka? Ngaba unayo iphupha eloyikekayo malunga nokuwa kwamazinyo? Ngaba ubusenza amaphupha amnandi? Fumana amawaka iisimboli zamaphupha kunye neentsingiselo kunye nobunzulu ukutolikwa kwamaphupha aqhelekileyo .
Iimpawu zeempawu ezi-5 kunye neentsingiselo
UMagick, uFeng Sui, okanye ugqirha weReiki? IPsychic Medium? Ukuseka ikhaya lakho elitsha okanye iofisi? Funda ukuba amandla ezinto ezi-5 anokuchaphazela njani ingqondo yakho, umzimba, umoya kunye nendalo. Fumanisa ubulumko obunzulu bokufanisa abantu bamandulo babebazi kakuhle. Funda ifayile ye- Iimpawu zeempawu ezi-5 kunye neentsingiselo .
Iimpawu zeentyatyambo kunye neentsingiselo
'Umhlaba uhleka iintyatyambo.' ~ URalph Waldo Emerson
Iintyatyambo zezinye zezona zipho zibalaseleyo esiziphiwe nguMama Gaia. Iintyatyambo zondla ingqondo yethu, umzimba kunye nomoya. Ukusukela kwimihla yokuzalwa, ukuya emitshatweni, ukuya emingcwabeni, nakuyo yonke eminye imibhiyozo kunye nokuhlangana, iintyatyambo zihombisa ubomi bethu ngendlela engenanto engenye. Zizinto zokuhombisa zendalo. Funda konke malunga Iintsingiselo ezingcwele kunye nezomoya zeentyatyambo .
Iimpawu zeZilwanyana zaseMelika zaseMelika kunye neentsingiselo
NjengamaCelt, amaMelika aseMelika anobudlelwane obusondeleyo nomhlaba. Bayayiqonda kwaye basebenza ngokuvisisana nayo kunye nazo zonke izidalwa eziphilayo ezikumgangatho wabo. Ukuba uyayiqonda imithi xa bethetha, izilwanyana xa zicula, kunye nezityalo kunye nemifuno xa zisibonisa imozulu ezayo okanye indlela ezinokusinceda ngayo ukuba siphilise - uya kufuna ukungena nzulu ngaphakathi Iimpawu zeZilwanyana zaseMelika zaseMelika kunye neentsingiselo .
Ngaba amanani athetha nawe? Ngaba ungumntu othanda iodolo kunye nezinto ebomini bakho zokongeza ngokufanelekileyo? Ngaba uyawazi amanani eneentsingiselo ezingcwele ezinokubalwa ngokudibanisa izibalo ezivela koonobumba begama lethu kunye nenyanga yethu yokuzalwa, usuku nonyaka? Funda konke malunga ne- Indlela yokuphila yoLwazi lokuBala, ikamva, injongo yomphefumlo, kunye nenombolo yokuhambelana .
UMoya, iTotem, kunye naMandla eZilwanyana
Ngaba uthanda izilwanyana ngaphezu kwabantu? Ngaba uyamangaliswa ziintsingiselo ezingcwele kunye nezokomoya zobukumkani bezilwanyana? Ngaba lixesha lokuba ubize kwizikhokelo zomoya wakho wezilwanyana kwaye udibane noMoya wakho, iTotem, kunye neZilwanyana eziMandla? Xa sasenza i-Daily Horoscope Astros, UMoya oMkhulu wasebeza kuthi ephupheni ukuba siza kwenza indawo eyahlukileyo enikezelwe kubahlobo bezilwanyana abaphilisayo, abaxhasayo nabasikhuthazayo. Ke, apha, unokufunda ngokukhawuleza malunga izilwanyana . Kodwa ungandwendwela indawo yethu yodade, i-WhatIsMySpiritAnimal.com yamakhulu Isimboli yezilwanyana kunye noMoya, iTotem, kunye neentsingiselo zeZilwanyana
Iintsingiselo zekhadi leTarot kunye nokuFunda iTarot
Ukuntywila ekuvumiseni? Ukufunda ukufunda itotot? Ngaba ufuna iinkcazo ezinzulu kunye neentsingiselo zekhadi le-tarot? Ngaba ufuna ukwazi malunga neMajor kunye neMinor Arcana kunye neSuti yeNdebe, iiWands, iPentekoste, kunye neenkemba? Ufike kwindawo efanelekileyo! Sinezinto ezininzi Iintsingiselo zeKhadi leTarot . Onke amakhadi e-tarot angama-78 kunye nesuti nganye ineenkcazo ezibanzi neziqondakalayo ongafuni kuphoswa zizo! Kwaye uya kufumana okuhle IZIFUNDO ZASimahla zokufunda !
Isikhokelo sokugqibela seZodiac Signs
Xa kuziwa kwiimpawu kunye neentsingiselo, Iimpawu zeZodiac zibetha kakhulu. I-AKA njengeHoroscope, i-Astrology, kunye neZimpawu zokuQala, Iimpawu zeZodiac zisifundisa ukuba thina nabanye 'sikabani' kwinqanaba lomphefumlo onzulu. Kungenxa yokuba zonke iiZodiac Sign 'iinkqubo' kwihlabathi liphela zisekwe kwisimboli sezilwanyana, uphawu lwethu lweZodiac lunokusinceda sinxibelelane noMoya wethu, iTotem, kunye neZilwanyana eziMandla ngokunjalo. Apha kwi-Daily Horoscope Astros, sinayo i-Intanethi Isikhokelo esipheleleyo seZodiac Signs ngeempawu ezingaphezulu kwama-20 ezahlukeneyo zeenkwenkwezi 'iinkqubo' ezigutyungelweyo. Fumanisa iNtshona, iTshayina, iNative American, iCeltic, kunye neMayan Zodiac Sign! Nceda indlela yomzali ngokufunda malunga neZodiac Sign yomntwana wakho. Kwaye ufumane ulwazi olunzulu malunga nokuhambelana kweZodiac, nako!
Ukuqonda iisimboli kunye neentsingiselo kunokukunceda njani
Ukuphuhlisa ukubanakho ukuqonda intsingiselo enzulu yeesimboli ezibonisa ebomini bakho kunokukunceda kulo naliphi na inani leendawo;
Ukuphuhliswa koMoya oPhakathi
Ukutolikwa kwephupha kunye nohlalutyo
Ukwenza ukuba uMthetho woMtsalane ukusebenzele
Ngokwenyani usetyenziso olunokubakho alunasiphelo njengombono wakho wobuthixo kunye nobuchule obungenamda!
Iimpawu kunye neentsingiselo: Sebenzisa ubulumko bamandulo kweli hlabathi lanamhlanje
Ngoku, kwihlabathi eliqhutywa yitekhnoloji, umntu unokucinga ukuba isimboli sisimbo okanye siphelelwe lixesha.
Akukho nto inokuthi iqhubeke nenyaniso.
Jonga nje kwiimpawu ze-intanethi, iitattoos kunye neendlela zangoku zokuthengisa. Bobathathu baqinisekisa ukuba imifanekiso enentsingiselo ayiprintwanga kuphela kwi-Consciousness ehlangeneyo, kodwa iyakhula kwaye iyatshintsha noluntu.
Yeyiphi i-apile emelwe kubuKrestu bokuqala (ukulingwa) kwaye uninzi lwabantu lucinga ntoni namhlanje (uhlobo lwekhompyuter) ngamaxabiso amabini ahluke kakhulu. Kulungile nabani na ofunde esi sivakalisi sokugqibela kwaye athi, 'uthini ukuba ndiyalingwa ukuba ndithenge iApple'… udibanise iisimboli ezimbini kwi-pun enye embi kakhulu.
Iimpawu ngokuyintloko zichaza umxholo ngaphandle kwesidingo samagama.
Kule nto, uyilo lweesimboli lufikelela kubantu abanokungaluqondi ulwimi okanye amasiko omnye komnye, kodwa ngandlela thile imifuziselo (ubuncinci bambalwa) iguqulela kulwahlulo.
Yiya kwiivenkile ezinkulu okanye kwenye indawo enabantu abaninzi. Bonisa phantse nabani na intliziyo kwaye ubabuze ukuba kuthetha ntoni.
Uya kufumana iimpendulo ezifanayo. Ke, iisimboli zinokusebenza njengokuxhawulwa ngumzekeliso okanye ileta yokwazisa.
Nangona kuyinyani ukuba intsingiselo yeesimboli ziguquka ngokuxhomekeke kwixesha kunye nenkcubeko, ezininzi iingqondo ezinkulu ezibandakanya uFrud zivakalelwa kukuba ezinye izifanekiselo zizonke.
Ukongeza ezinye iinkcazo-ntetho ziye zavela kwindalo iphela ngenxa yokuvezwa. Uphawu loxolo ngumzekelo olunge kakhulu (hee, nikeza uxolo ithuba!).
Kwisikimu somntu sezinto, iimpawu ezingumfuziselo azibonisi nje umntu okanye indawo, kodwa uguquko lwehlabathi.
Abantu bokuqala babengenawo amagama abhaliweyo, kwaye ukugquma, impempe kunye nokuqhayisa izandla kuhambe kude kube ngoku. Kwakufuneka njani ukuba umntu afumane umhla?
Ke umntu othile okrelekrele wakudala wafumana umbono wokwenza imifanekiso elula exelela ibali kuye nabani na oyifumeneyo. Mhlawumbi iminqweno yakhe yothando inokutshintsha ekugqibeleni!
Umkhondo wezilwanyana oqoshwe elulwalweni, umzekelo, uxelele abanye abazingeli-abaqokeleli ukuba indawo yayinomdlalo olungileyo. Olu yayilusetyenziso olusebenzayo lwe-iconography, kodwa masithathe eli nyathelo libhekise phambili.
Kumphandi uphawu luya ngaphaya kokuqiqa ngengqondo.
Abantu bokuqala basebenzise ii-icon njengendlela yokubonisa amabali abo, iimvakalelo zabo kunye noko bakufundileyo ngemekobume yabo.
Ngamanye amaxesha kunzima ukutolika iisimboli zamandulo kuba sikude kakhulu kweso sithuba sokuqala (ubuncinci uninzi lwethu lunalo).
Nangona kunjalo, bamele enye yeendlela zokuqhubeka nokuqonda imeko yomntu ukuba sithathe ukutsiba kokholo kukuqiqa okunomdla.
Intuition kunye nokutolika iintsingiselo ezingumqondiso
Iimpawu ziyindlela yokuvula kungekuphela nje iimfihlakalo ezinkulu, kodwa kwanemfihlakalo yangaphakathi yesiqu sakho - imibuzo ephikisayo yokuba kutheni silapha… malunga noko kufuneka sikufunde kulo mzimba nalapho unokufumana ikofu efanelekileyo.
Intuitive ibaluleke kakhulu kuphononongo lwethu. Izitshixo zemihla ngemihla zeHososcope Astros kakhulu kwizinto zokomoya zesimboli, kwaye ukuze wenze oko kuya kufuneka ulungele ukuhamba namathumbu akho.
Zonke iinkolo kunye nefilosofi zineempawu ezithile. Ootitshala basebenzisa ezo iisimboli njengezikhokelo zokufumana intsingiselo enzulu yamava onke.
Nokuba inguMthonyama waseMelika, iCeltic, iMpuma Ekude, iAstrological okanye iOceanic ilizwe leesimboli linomdla kwaye liyangqinelana nalo lonke ixesha kunye nendawo. Ke sijoyine ekuzingeleni kwethu ukuze siqokelele zonke iintlobo zeentsingiselo ezingumqondiso ezikude nakude.
Zonke izinto zinesiqalo, kwaye kuya kubakho okuninzi okuseza!
pisces umfazi ebhedini kunye nendoda yetaurus
I-scorpio umfazi kunye ne-pisces yomtsalane wabantu